किन देखिन्छन् डरलाग्दा सपना ? थाहा पाउनुहोस - Everest Dainik - News from Nepal
किन देखिन्छन् डरलाग्दा सपना ? थाहा पाउनुहोस
काठमाडौं, चैत२८ । मानिसले अनेक विषयमा सपना देख्ने गर्छन् । प्रायः दैनिक जीवनमा भइरहेका त कहिले काल्पनिक दृश्यसमेत सपनामा देखिन्छ । सपनामा देखिएका घटनाले डराउने, आत्तिने र कतिपय अवस्थामा उठेर हिँड्नेजस्ता गतिविधिसमेत देखिन्छ । कहिलेकाहीँ डरलाग्दो सपना देख्नु सामान्य हो । तर, लगातार डरलाग्दो सपना आउन थाल्यो भने त्यो मनोवैज्ञानिक समस्या हो । यसको समयमै उपचार गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
प्रा.डा. सरोजप्रसाद ओझा
– अनिद्रा तथा निद्राको गडबडीका कारण डरलाग्दा सपना देखिने गर्छ ।
– कमजोर मनोविज्ञान भएका मानिसले डरलाग्दा सपना बढी देख्ने गर्छन् । दिनभर घट्ने घटना, परिवेश र वातावरणले उनीहरूलाई असर पारेको हुन्छ ।
-जीवनमा घटेका डरलाग्दा घटनाका कारण तथा लगातार तनाव भएमा ।
– नसालु पदार्थ सेवन गर्ने मानिसमा समेत यस्तो समस्या देखिन्छ ।
-बालबालिका र किशोरकिशोरीमा पनि यस्तो समस्या बढी देखिन्छ । बढ्दो उमेरमा हुने मानसिक परिवर्तन र कमजोर मनोविज्ञानका कारण उनीहरूमा यो समस्या हुन्छ ।
– बच्चाहरू सपनामा डराउने अवस्थालाई अनुसन्धानकर्ताले दुई भागमा बाँडेका छन् । ती हुन्, नाइटमेयर डिसअर्डर र नाइट टेरर ।
– विशेषगरी, बच्चाको कलिलो दिमागमा बसेका नराम्रा छापका कारण नाइटमेयर डिसअर्डर हुने गर्छ । यसमा राति बर्बराउने, आत्तिने र तर्सिने आदि हुन्छ ।
समाधानः यो कमजोेर मनोविज्ञानबाट हुने समस्या भएकाले यसले दीर्घकालीन असर गर्दैन । उमेर बढ्दै गएपछि आफैँ ठीक भएर जान्छ ।
-नाइट टेरर हुँदा आत्तिने, कराउने र उठेर हिँड्नेजस्ता समस्या देखापर्छन् । यस्ता गतिविधि लगातार भइरहन्छ । यो भने जटिल खालको समस्या हो ।
उपचारः बच्चामा यस्तो समस्या देखिन थालेमा मनोचिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ । नियमित नाइट टेररको समस्या भएमा त्यो कालान्तरमा मानसिक रोगको कारणसमेत बन्न सक्छ । तसर्थ, समयमै मनोसामाजिक परामर्श लिन आवश्यक छ । यो समाग्री नयाँ पत्रिकाबाट लिइएके हो ।
ट्याग्स: healthy life style